Iskoolka Klockarbergsskolan (F-9) waxuu ku yaal bartamaha Skinnskatteberg waxuuna u dhowyahay qeybta hoose ee balliga Vättern. Agagaarka iskoolka waxaa ku yaal guriga xilli firaaqaha, gaaroon isboortis oo gudaha ah iyo maktabad. Iskoolka dhaqanka ee Kulturskolan Korpen waxaa laguugu diyaariyay iskool hiddaha iyo dhaqanka ah oo bilaash ah, waxaana loogu tala galay ardayda da’doodu eey ka yartahay 20 sano.
Degmada Skinnskatteberg waxeey dhinaca waxbarashada dugsiyada sare, waxbarashada dadka waaweyn iyo waxbarashada heerka jaamacadda ee habka waraaqaha guriga laguugu soo dirayo, u xil saartay ururka waxbarashada ee gobolka Västmanland ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan (NVU). NVU waxuu kuu hayaa fursado waxbarasho oo kala duwan. Waxaa jirta wada shaqeeyn eey la leeyihiin degmooyinka u dhowdhow iyo ururada degmooyinka gobolka iyo kuwo gobolka banaankiisa ah.
Turjubaan waa la hayaa haddii loo baahdo.
Systemair - Process Leader Marketing & Communication Marknadskommunikatör
Specialist inom datacenter IT-strateg
Vikarie till fritidshemmet Barnskötare
Process Leader Marketing & Communication Marknadskoordinator
Barnvakt / nanny , extrajobb , 1 - 2 gånger / månaden , Fagersta Barnflicka/Barnvakt
Behandlingsassistent (drogterapeut) Behandlingsassistent/Socialpedagog
Tandläkare till Folktandvården Västmanland AB , Folktandvården Fagersta Tandläkare
Teknisk Administratör Depåtekniker, prospektering
Synare till Fagersta Stainless Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Energi - & miljöingenjör Miljöingenjör
Stockholm 180 km
Fagersta 25 km
Örebro 85 km​